सम्झिदा अहिले पनि रुन मन लाग्छ | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
सम्झिदा अहिले पनि रुन मन लाग्छ
१७ आश्विन २०७७, शनिबार १५:४८
मेरो नाम रोशना खातुन हो । मेरो त्रियुगा नगरपालिका वडा नं ३ उदयपुरमा बस्छु । हामी यहाँ धेरै पहिले देखि नै बस्दै आएका हौँ । मेरो ससुराहरू बि.सं २०२४ मा यहाँ आएर बसेपछि यो क्रम निरन्तर छ ।
मेरो घर र मस्जिद अगल बगलमा नै छ । चैतको दोस्रो हप्ता तिर हाम्रोमा यहाँ जमातीहरु धेरै नै थिए । त्यति बेला सी.डी.ओ कार्यालयमा गएर जमातीहरुका बारे भन्यौँ । धेरै कर गरेपछि सी.डी.ओ कार्यालयबाट मान्छेहरू आउनुभयो र हेर्नुभयो । लकडाउनका बेला कतै पठाउन मिल्दैन र केही दिन यहीँ नै बस्नु र केही आवश्यक परे भन्नु भनेर वहाँहरू जानुभयो ।
सी.डी.ओ कार्यालयका कर्मचारीले यसो भनेको ठिक १०-१२ दिन पछि उहाँहरूको कोरोना चेक गर्नु आउनुभयो । जमातीहरुको कोरोना चेक भयो। धेरैको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । पोजेटिभ रिपोट आएपश्चात् एका एक राती एम्बुलेन्स ल्याएर लानु भयो । त्यसपछि गाउँमा आन्दोलन नै भयो । चारैतिर पुलिस बसेर घेर्न थाले । जमातिहरुलाई लिएर गएपछि घरबाट सुरुमा मेरो देवरलाई लिएर गयो । त्यसपछि पालै पालो नन्दलाई, नन्दको भाइलाई । त्यो दिन घरबाट ४ जनालाई लिएर गयो ।
१२ जना जमातिलाई कोरोनाको रिपोर्ट आएपछि समुदायमा सबै भन्दा धेरै तनाव हामीलाई भयो । मेरो घर मस्जिदसँगै थियो । मस्जिदलाई समस्या परेको वेलामा घरैबाट खाने कुराहरू जस्तै चामल, तरकारी, दूध, दालहरू आदि मेरो देवरले लगिदिनुहुन्थ्यो । आउने जाने धेरै भएर सुरुमा देवरलाई नै लाग्यो । देवर पछि देवरको छोरालाई, त्यसपछि मेरो भान्जालाई, नन्दलाई अनि नन्देभाईलाई । यी सबै जनालाई लिएर गयो । टोलको २ थप सहित ८ जनालाई लिएर गयो ।
त्यो बेला डर त्रास नै अर्कै किसिमको थियो । जिन्दगीमा पहिले नभएको कुरा थियो । अनुभव थिएन । बाहिर निस्कनै नहुने । धेरै नै डर थियो । बाहिर गेटमा पुलिसहरू बस्थे । अरू त अरू आँगनमा बसेर खाँदा समेत गेटमा लाठी हानेको थिए ।
‘तिमिहरूलाई एकचोटी भनेर पुग्दैन?’ भनेर गाली गर्थे।
भित्रै आएर पिट्ला जस्तो गर्थे । चारै तिर पुलिस नै पुलिस । बारीमा तरकारी समेत टिपेर ल्याउन पाइँदैन थियो । आफ्नै घर आँगनको बारीमा तरकारी टिप्न समेत जान पाइएन । भित्रको भित्रै ।
मनमा अनेक कुराहरू खेल्ने गर्थ्यो । यस्तो देख्नु भन्दा त बरु मरेर जान पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो । आफ्नो मान्छेहरू कहाँ लगेर राखेको छ, के गरेको छ केही थाहा थिएन । उनीहरूको बारे हामीलाई केही भनेको थिएन । उनीहरूले ठुलो गुनाह गरे जस्तो गरेर गाडीमा राखेर लागेको जस्तो मात्र थियो।
घरमा बस्दा कति दिन त हामीले खानै खाएनौ । बिहान पकाएको खाना ३ छाकसम्म पुग्थ्यो । खानै मन नलाग्ने । बिहान पकायो बेलुका त्यही रहने । धेरै टेन्सन भयो मलाई ।
सुरु सुरुमा मस्जिदमा आउने जमातिले कोरोना ल्यायो भन्ने कुरा भयो । त्यसपछि भारतमा पढ्ने मेरो देवरको छोरोले ल्यायो भन्ने हल्ला चल्यो । त्यो हल्ला चलेपछि त हामीलाई आफ्नै दाजुभाइले पनि हेर्न छाडे । सबैले मान्छेहरूले हेला गरे नराम्रो भने। हामीलाई त मान्छेहरूले समाजमा ठुलो गुनाह गरेको अपराधी जस्तो बनाइ दियो । मानौँ कि हामीले नै यो कोरोना बनाएर सबैलाई लगाइदिएको जस्तो व्यवहार गरे ।
यस्तो हल्ला चल्नुमा पत्रकारहरूको हात छ । पत्रकारहरूकै कारणले यस्तो भएको हो । समाचारहरूमा जमातीहरु पनि लुकाएर राखेको रहेछन् भन्ने आरोपहरू आयो । जबकि हामी आफैले सम्बन्धित निकाय, वडा, प्रशासनमा गएर खबर गरेका थियौँ जमातीहरुका बारे । तर उल्टै आरोप खेप्नु पर्‍यो । त्यसै गरी समाचारमा कोरोना जमातीहरुका कारण नभई भारतको युपिमा बस्ने केटाले ल्याएको भन्ने पनि आयो । पत्रिकामा यस्तो समाचार आएपछि झन् समस्या भयो । त्यो बेला मलाई यस्तो जुनी भोग्नु भन्दा बरु भुक्लुक्कै मर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो पनि मनमा लाग्थ्यो ।
मेरो परिवार ३५ दिन आइसोलेसनमा बसेर आयो । त्यो दौरान आरोपहरू धेरै खेप्नुपर्‍यो । प्रशासनले पनि एकैचोटी सबैलाई नलाने । कुरा केही बुझाउने हैन, आउँछ परिवारको मान्छेलाई समातेर लान्छ । कुरा राम्रो सँग बुझाएको छैन सम्झाएको छैन । एम्बुलेन्सकोको आवाजले नै डर लाग्ने । एम्बुलेन्स आउने बित्तिकै डरले थुरथुर हुन्थ्यौ ।
फेरी समाचारमा ‘यति वर्षको मानिसलाई कोरोना भयो’ भनेर आउने । त्यसो हुँदा मानिसमा झन् हलचल हुने । छिमेकमा त्रास फैलिने । ‘मानिसहरू तिम्रो उमेर कति? तिम्रो उमेर कति’ ‘अब कसलाई लैजाला?’ भन्दै हिँड्ने ।
अङ्कलहरूलाई लगेपछि १५ दिन पछि हाम्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ आयो । अनि हामीलाई लानुभयो । तर मलाई रोग लागेको कुनै महसुस नै भएन । अस्पतालमा बरु अरू कुराहरूले तनाव दिए तर कोरोनाको कुनै लक्षण र समस्या देखिएन । मलाई एक महिना टुरमा विराटनगर गएको जस्तो लाग्थ्यो । उपचारमा हैन ।
उता बाट फर्के पछि कोही मानिसहरू नजिक नआउने । कोही बोल्दै नबोल्ने । जताततै बार लगाएको अवस्था थियो । उता जाऊँ उतै बार, यता जाऊँ यतै बार । पसलहरू पनि सबै बन्द थिए । खुलेकोहरुले केही नदिने ।
पहाडी मानिसहरूलाई चाहिँ सामान दिने, यहाँको मानिसलाई नदिने गर्थे ।
‘सामानै छैन’ भन्थे ।
पैसा भएर मात्र पनि केही हुँदो रहनेछ । पैसा पनि चलेन । पैसा थियो तर खान पाइँदैनथ्यो । हामी जाँदा पसलहरू नै बन्द गरिदिने, सटर झारिदिने गरे । कसैले दिए पनि ‘परै बस’ भन्ने । अरू मानिसहरू बाहिर डुल्थे । हामीलाई चाहिँ डुल्न निषेध थियो । हामीलाई एक जना विष्ट भन्नेले सामान दिन्थ्यो । तर दिनमा ल्याउन पाउँदैनथ्यौँ । बिहान वा राति मात्र जानु पर्ने थियो । दिनभरि पुलिसहरू बसेका हुन्थे । निगरानी गर्थे । बिहान ४ बजे नै उठेर सामान लिइसक्नु पर्थ्यो । छिमेकीको पसलले त कुनै पनि समय सामान दिएन । तर त्यो विष्ट भन्ने छिमेकीले सहयोग गर्‍यो त्यो समय ।
अहिलेको जनजीवन सामान्य भएको छ पहिले भन्दा । अहिले नजिक हुने, मानवीय व्यवहार गर्ने गर्छन् । त्यो बेला त हामीलाई मान्छे बराबर पनि गरेनन् ।
यो समुदायमा धेरै जातको मानिसहरू छ । कोरोना नहुँदा एकदम मिलेर बस्ने र एक आपसलाई सहयोग गर्ने समुदाय कोरोना आउनासाथ नचिनेको जस्तो गरे। पसलमा सामान मात्र दिएको भए पनि धेरै राहत हुन्थ्यो । त्यही बेलामा हाम्रो रमजानको व्रत पनि थियो । व्रतको समयमा कतै केही नपाउने ।
हामीले तरकारी खेती पनि गरेका थियौँ । तर पुरै तरकारी खेर गयो । पुरै उत्पादन कुहियो । कुनै बेच्न पाइएन । टिपेर ल्याएर खानु समेत पाइएन बेच्न त कुरै छाडिदिनुस् ।
त्यो वेलाको कुरा सम्झिदा अहिले मलाई रुन मन लाग्छ । यदि पिडा हुन्थ्यो की म भन्न सक्दिन । त्यो वेला समुदायमा अरूलाई भन्दा बढी हामीलाई पिडा भयो ।
यो कथा रोशना खातुनसंग गरीएको कुराकानीमा रहेर बिक्रम राईले लेख्नु भएको हो ।
यो घृणा हैन माया र हौसला बाँड्ने बेला हो
२४ भाद्र २०७७, बुधबार ०९:१६
म कहिले आफ्नै देश फर्कन पाउछु होला ?
१४ आश्विन २०७७, बुधबार १७:१२